- Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာရန် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ကတိပြု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၈)လကြာကာလအတွင်း (၈.၉)ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာ
တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးက ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စံပြပုံစံဖြစ်
Canton ကုန်စည်ပြပွဲအား အော့ဖ်လိုင်း (offline) ပြပွဲပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ကျင်းပ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်း တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၌ ပြီးဆုံး
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ နယ်ပယ်စုံတွင် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် ကတိပြု
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Tianzhou-3 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်ကို ယခုရက်ပိုင်း အလျဉ်းသင့်ချိန်တွင် လွှတ်တင်ရန်ရှိ ၊ အာကာသယာဉ်နှင့်ဒုံးပျံအား လွှတ်တင်မည့်နေရာသို့ ဒေါင်လိုက် ရွှေ့ပြောင်းထား
Shenzhou-12 က အာကာသပင်မခန်းမှ ခွဲထွက်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် မောင်းသူမဲ့ 5G နည်းပညာသုံး လေသင်္ဘော စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု ပြီးစီး
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန့်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်းအသီးသီးတွင် Nucleic acid စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
အာဖဂန်တာလီဘန်တို့နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရုံမှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဟု ဥရောပသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်အရာရှိ ပြောကြား
ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ နောက်ဆုံးပေါ် S-500 ဒုံးကျည်စနစ် စတင်ရရှိ
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလ ကင်ညာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားကဏ္ဍ
တရုတ် ၊ ရုရှား ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အီရန်နိုင်ငံတို့က အာဖဂန်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာ
လက်ဘနွန်နိုင်ငံက အီရန်လောင်စာဆီများ သယ်ဆောင်လာသည့် ဆီတင်ယာဉ်များ လက်ခံရရှိ
ယခုနှစ်အတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် အာဖဂန် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ ၆၃၄,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလအေဂျင်စီထုတ်ပြန်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ထိ ကလေးများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု စတင်မည်
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး သက်ဆိုင်ရာ ဘက်ပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြန်လည် ပြုလုပ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တိုက်တွန်း
မြောက်ကိုရီးယားက ရထားပေါ်မှ ဒုံးကျည်ဖြင့် အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ကို စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် သြစတြေးလျ တို့ လုံခြုံရေးမိတ်ဖက်သစ် ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ
ပူတင်က ဆီးရီးယားအတွက် အဓိကပြဿနာမှာ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ နိုင်ငံခြားတပ်များ ဝင်ရောက် တပ်စွဲထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆို
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ပူတင် COVID-19 ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ကရင်မလင်နန်းတော် ထုတ်ပြန်
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သံတမန်ရေးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော် ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းချုံချင့်တွင် ပထမဆုံးမောင်းသူမဲ့ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းစတင်ပြေးဆွဲ
အရှည်လျားဆုံးစစ်ပွဲ - အပိုင်း ၄ လွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးမှု
တရုတ် နိုင်ငံ၏ လူလိုက်ပါသောအာကာသယာဉ် Shenzhou-12 ၏ returncapsule အောင်မြင်စွာဆင်းသက်နေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ချန်သူ (Chanthu) တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှန်ဟိုင်းတွင် ဘေးကင်းရေးအစီအမံများဆောင်ရွက်
အရှည်လျားဆုံးစစ်ပွဲ မှတ်တမ်းရုပ်သံ : အပိုင်း (၂) လူ့အခွင့်အရေးများ
ဥရောပတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ ပထမဆုံး စတင်တည်ဆောက်
ဟန်ကျိုး၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်တွင်ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က In-Fa တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြေပြိုမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းဗဟိုချက်တွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်စက္ကန့်လျှင် ၃၈ မီတာ ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ် ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးချုပ်များမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်။ယခုနှစ်တွင် ၆ ကြိမ်မြောက်တိုက်ခတ်သည့် အဆိုပါ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ဖော်ထော်ခရိုင် ကျိုးရှန် မြို့ အား မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ကျားရှင်းမြို့နှင့်ကျန်းစုပြည်နယ် ချီတုန်းမြို့ကြားရှိ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဒုတိယအကြိမ် မြေပြိုမှုများထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသအာဏာပိုင်များကခန့်မှန်းကြသည်။ကျဲ့ကျန်း၊ကျန်းစု ၊ အန်းဟွေးပြည်နယ် နှင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့တို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းလည်းခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Typhoon In-Fa lands in east China, second landfall expected
HANGZHOU, July 25 (Xinhua) — Typhoon In-Fa made landfall in east China’s Zhejiang Province at noon on Sunday, packing winds of up to 38 meters per second at its center, according to the provincial flood control headquarters.
The typhoon — the sixth of this year — hit land in Putuo District, Zhoushan City, at approximately 12:30 p.m., the headquarters said.
Weather authorities have forecast the typhoon will makeasecond landfall in coastal areas between Zhejiang’s Jiaxing City and Jiangsu Province’s Qidong City on Sunday night.
It is expected to linger in east China after its second landfall and bring continued strong rainstorms to the Zhejiang, Jiangsu and Anhui provinces, and Shanghai.
သဘာဝနေရာ ၄ ခုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနေရာ ၃ ခုအား ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းတွင် ယူနက်စကို ထည့်သွင်း